Samsung ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ One UI ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်များ အပိုင်း (၁) • TECH CORNER
ဒီရက်ပိုင်း အနောက်တိုင်းက နည်းပညာ သတင်းတွေကလဲ သိပ်ထူးခြားမှုမရှိတာကြောင့် Tips and Tricks လေးတွေ ရေးဖြစ်ပါမယ်။
Tips and Tricks ခေါင်းစဉ်ကို ပြန်ဆက်ရရင် Boycott ကာလ‌ဆိုတော့ ဖုန်းတွေကို Boycott လုပ်ကြရင်း Samsung ဖုန်းတွေအသုံးများလာတယ် ထင်ပါတယ်။ Admin ကိုယ်တိုင်လဲ OnePlus ပြန်ရောင်းပြီး Samsung လေးကိုင်ထားတာဆိုတော့ တော်တော်များများနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် One UI: Tips and Tricks Part (1) ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်လေး တစ်ခု ရွေးထားပါတယ်။
Samsung ရဲ့ One UI ဆိုတာလဲ များပြားလှတဲ့ Android Skins တွေထဲမှာ Features အစုံလင်ဆုံးထဲက တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် Hidden Tricks တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အခု Part (1) လေးကို သဘောကျတဲ့ Samsung Users များရင် Part (2)၊ Part (3) အထိ ဆက်ပြီး ရေးဖြစ်ပါမယ်ခင်ဗျာ။
အခုဖော်ပြပေးမယ့် Tips and Tricks တွေက One UI 3, 3.1 Samsung ဖုန်းတိုင်းအားလုံးနီးပါးမှာ အဆင်ပြေပါတယ်။
ကိုယ်က Application တစ်ခုသုံးနေတုန်း၊ Game ဆော့နေတုန်းမှာ ဖုန်းဝင်လာရင် အပေါ်ဘက် Noti Bar နေရာကနေ Pop-Up ပုံစံလေးနဲ့ ဖုန်းဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းဝင်လာတဲ့ ပုံစံအပြည့်ကြီးပေါ်မလာတော့ ဆော့နေတဲ့ Game, သုံးနေတဲ့ App က နေ ထွက်မသွားတော့ပါဘူး။
(Pop-Up ပေါ်လာရာကနေ ဖုန်းကိုင်လိုက်ပြီးသွားရင်လဲ ဖုန်းပြောနေတဲ့ မျက်နှာပြင်ကြီး ပေါ်မနေစေပဲ အ‌ပေါ်မှာ Pop-Up လေးအတိုင်း ရှိနေစေချင်ရင် Keep Calls in pop-up ဆိုတာလေးကိုပါ On ပေးထားလိုက်ပါ။)
Pop up call ကို ကိုင်လိုက်ရာကနေ (Keep Calls in pop-up) ဆိုတာလေးကို နံပါတ် ၁ က အတိုင်း On မထားခဲ့ရင် ဖုန်းပြောနေတဲ့ screen ကြီးက အပြည့်ပေါ်နေမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ SIM ၂ ကဒ် ကိုင်သူတွေအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ဘယ် SIM ကို ဖုန်းဝင်လာတယ်ဆိုတာ သိချင်ရင် လွယ်လွယ်သိနိုင်တာ‌‌ကတော့ Call Background Feature ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Phone App>ညာဘက်အ‌ပေါ်ဆုံးက အစက်သုံးစက်>Setting>Call Background ဆိုပြီး တစ်ဆင့်ချင်း သွားလိုက်ရင် SIM 1 နဲ့ SIM2ဆိုပြီး ၂ ခု တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ SIM 1 အတွက် ကိုယ်ကြိုက်ရာ Background တစ်ခု၊ SIM2အတွက် ကိုယ်ကြိုက်ရာ Background တစ်ခု စီ ရွေးပေးထားလိုက်ရင် ဘယ် SIM ကို ဖုန်းဝင်လာတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပေးထားတဲ့ Background ကို ကြည့်ပြီး တန်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
ဒီကောင်က Android 11 မှာ Native ပါလာတဲ့ feature ဖြစ်ပါတယ်။ Notifications တွေအများကြီးတက်တဲ့အခါ မျက်စိရှုပ်တယ် အကုန် Clear လုပ်မယ်ဆိုပြီး လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ Clear လုပ်ပြီးတော့မှ ကိုယ်ဖွင့်ကြည့်ချင်တဲ့ Notification လဲ ရောပြီး ပါသွားတာမျိုး ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဆိုတော့ Notification History တွေကို One UI, Android 11 မှာ ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Setting> Notification Setting> Advanced Setting> Notification History ကို On ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။
4.Widgets on Lock Screen
One UI မှာ Lock Screen ကို မဖွင့်ပဲ Widgets လေးတွေကို ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Lock Screen ပေါ်က နာရီလေးကို ထိလိုက်ရင် Widgets လေးတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Setting> Lock Screen> Widgets ကို သွားပြီး ကိုယ်မြင်ချင်တဲ့ Widgets တွေကို ရွေးထားနိုင်ပါတယ်။
5.Double Tap to Sleep and Wake
Screen ကို Double Tap နဲ့ ပိတ်၊ ဖွင့်လုပ်ဖို့အတွက် Setting> Advanced features> Motion and Gestures> Double Tap to wake/sleep ကို on ပေးလိုက်ပါ။ ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်တာနဲ့ Screen ပွင့်လာစေချင်ရင် Lift to wake ကို ဖွင့်ပေးခဲ့လို့ ရပါတယ်။
6.Live Captions and Google Subtitles
Settings>> Asscessibility >> Hearing enhancements >> Live caption
Movies, Shows စတဲ့ တစ်ခုခုကို ကြည့်တဲ့အခါ Subtitles က မပါတော့ စကားလုံးတိုင်း နားမလည်တာမျိုး၊ သီချင်းဖွင့်ထားတုန်း စာသားသိချင်တာမျိုးတွေဆို ဒီ Feature လေး ဖွင့်ထားရင် Display ပေါ်မှာ စာတန်းထိုးပေးမှာပါ။ နည်းနည်းလေး‌နောက်ကျတတ်ပေမယ့် တော်တော်လေး အသုံးဝင်ပါတယ်။
English Language တစ်မျိုးပဲ လောလောဆယ်ရပါဦးမယ်။ Volume Button ကနေ အသံ အတိုး၊ အချဲ့ လုပ်တဲ့အခါ ပေါ်လာတဲ့ အစက်လေး သုံးစက်ကနေလဲ Live Captions ကို ဖွင့်၊ ပိတ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
7.Customize Power Button (Side Key)
Settings >> Advanced features>> Side Key ဒီနေရာမှာ Double Press လုပ်ရင် Camera လား၊ Bixby လား၊ App တစ်ခုခုလား ဆိုတာကို သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းသုံးဖြစ်နေတဲ့ App တစ်ခုကို ပေးထားလိုက်ပြီး ကိုယ်ဖွင့်ကာနီးတိုင်း လိုက်ရှာစရာမလိုတော့ပဲ Power Button ကို ၂ ချက် နှိပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။
Application တွေကို App Drawer ကနေ ဖွက်ထားချင်တယ်ဆိုရင် Home Screen ပေါ်မှာ Long Press ဖိထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Setting> Hide Apps ကနေ ဖွက်ချင်တာတွေ ဖွက်လို့ရပါတယ်။ ပြန်ရှာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ App Drawer ရဲ့ Search ကနေ ပြန်ရှာလို့ရပါတယ်။
9.Show battery percentage
Notifications>> Advanced Setting>> show battery percentage ကနေ Battery Percentage ကို Notification မှာ ပေါ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။
Facebook account ၂ ခု၊ Messenger ၂ ခု အဲ့လိုမျိုး အကောင့် ၂ ခု သုံးချင်သူတွေအတွက်က Settings>Advanced Features>Dual Messenger ဆီကို သွားပြီး On ပေးလို့ရပါတယ်။
Facebook, Messenger, LINE, Viber, Telegram စတဲ့ Social & Instant Messaging Apps တွေကို ၂ ခု စီ သုံးလို့ရပါတယ်။
Notification ဝင်ရင် သို့ ဖုန်းလာရင် Flash မီးလင်းတာကို ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် Setting>Accessibility>Advanced Setting>Flash Notification ကို သွားပြီး on ပေးလို့ ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Camera Flash Notification လား၊ Screen Flash Notification လား ဆိုတာကို လဲ ကိုယ်ကြိုက်ရာ ရွေးပြီး ဖွင့်ပေးထားလို့ရပါတယ်။
12.Replace App Shortcut
ဖုန်းစဖွင့်တဲ့ Lock Screen ရဲ့ အောက်ဘက် ဘယ်နဲ့ညာမှာ Default အနေနဲ့ Phone, Camera ဆိုပြီး App ၂ ခုပါပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ App ကို ပြောင်းထားချင်ရင် Settings >> Lock screen >> shortcuts ကိုသွားပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ App ၂ ခုကို ပြန်ရွေးပေးလို့ ရပါတယ်။
13.Switch to Google Discover
Home Screen ကနေ ညာဘက်အစွန်ဆုံးကို ဆွဲရင် Samsung Free ဆိုတဲ့ သတင်းတွေဖတ်လို့ရတဲ့ Features ကို Default အနေနဲ့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ လောက်လောက်လားလား ဖတ်စရာ မရှိတဲ့ Samsung Free ကနေ Google Discover ကို ပြောင်းချင်ရင် Home Screen ပေါ်မှာ Long Press နှိပ်ပါ၊ ပြီးရင် ညာဘက်အစွန်ဆုံးကို ပွတ်ဆွဲလိုက်ရင် ပုံထဲကလို Samsung Free ကနေ Google Discover ကို ပြောင်းပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။
(တချို့ Old Models တွေမှာ One UI 3.1 ရောက်တဲ့အထိ Google Discover ကို ပြောင်းသုံးလို့မရတာမျိုးတွေတော့ ရှိပါတယ်။)
14.Change Home Screen Layout
Applications တွေ အကုန် Home Screen မှာပဲ ထားတာနဲ့ Home Screen သီးသန့် ရယ်၊ အောက်ကပွတ်ဆွဲတော့မှ တက်လာတဲ့ App Drawer ရယ် အဲ့လို ထားချင်တာမျိုးဆိုရင် Home Screen>Long Press> ‌ညာဘက်အောက်ဆုံးထောင့်က Setting> Home Screen Layout မှာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကို‌ ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
(ဒီနေရာမှာ ကိုယ့် Home Screen ကို စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ Setting တွေ အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။)
15.Remove Location when sharing photos
Gallery ထဲမှာ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ပြန်ကြည့်ရင်း တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြန်ပြီး share ပေးချင်တဲ့အခါ Share Button လေး နှိပ်ရင်းနဲ့ Remove Location Data ဆိုတာလေးကို ပါ တစ်ခါတည်း နှိပ်ပြီး Sharing လုပ်ရင် Location ကို ဖျောက်ပြီး Share နိုင်ပါတယ်။ အခုလို ကာလမှာ ကိုယ့် Privacy အတွက် အဆင်ပြေတာပေါ့။
ဆိုတော့ Article အစမှာပြောခဲ့သလိုပဲ ဒီ Part (1) ကို သဘောကျသူများရင် Part (2), Part (3) စသည်ဖြင့်ဆက်ရေးဖြစ်ပါမယ်။
Google Search ကို ထိထိရောက်ရောက် အထာကျကျ ဘယ်လိုသုံးကြမလဲ?
Post Views: 1,455 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ…ကျွန်တော်တို့ Page ရဲ့ အပတ်စဉ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့တိုင်း တင်ဆက်ပေးသွားမဲ့ Tech Knowledge
Windows 10 အတွက် အကောင်းဆုံးသော Free Softwares 10 ခု
Post Views: 2,771 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 ကျွန်တော်တို့တွေ Computer နဲ့ Windows 10 မှာ ဓာတ်ပုံတွေ ပြင်မယ်၊ Videos တွေ Edit
Post Views: 12,214 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 Google Search ကို ထိထိရောက်ရောက် အထာကျကျ ဘယ်လိုသုံးကြမလဲ? Unicode ကျွန်တော်တို့အားလုံး Google search engine
Best features of MIUI 11
Post Views: 10,719 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 MIUI 11 ရဲ့ အကောင်းဆုံးသော Features များ #Unicode MIUI 10 ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်